Jaad La’aan Maanta ka Jirta Magaalada Boorama. | Awdalmedia.com
Jaad La’aan Maanta ka Jirta Magaalada Boorama.
Guud ahaan magaalooyinka Somaliland ayaa maanta laga dareemay Qaad la’aan ka dib markii Itoobiya laga joojiyay jaadkii ka iman jirey ee lagu cuni jirey dalka.
Dadka ku dhaqan Boorama ee cuna jaadka ayaa maanta u ahayd maalin ku adag, waxaanay dhex wareegayeen suuqyadda magaaladda si wax yar uun usoo helaan oo qaadiradda iskaga jabiyaan, waxaana goor dambe la keenay jaad yar oo qaali ah,inkastoo markiiba denbe ay dad gadoodsan ku qamaamay jaadkan yar ee yimid ee waliba qaaliga lagu iibinayey.
Qaadka ayaa la hakiyey saddex cisho, iyado wararka sheegayaan in munaasibada qaran ee Itoobiya darteed loo joojiyey, halka qaar kale sheegayaan in shalay isku dhac kale ku yimid Oromadda iyo Soomaalidda taasina ay keentay qaadka la joojiyey.
Sidoo kale illa hadda dawlada Itoobiya iyo Somaliland midna kama hadal, haseyeeshee dadka ka gacansada qaadka ayaa sheegay in sababta loo joojiyey tahay isku dhaca ku yimid Soomaalida iyo Oromadda.